Wasaaradda Dastuurka oo kulan la yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasaaradda Dastuurka oo kulan la yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir “SAWIRRO”
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jamac ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud (Filish), iyagoo kawada hadlay arrimaha dib-u-eegista dastuurka gaar ahaan maqaamka caasimadda Muqdisho ay ku dhex yeelanayso nidaamka Federaalka.
Guddoomiyaha ayaa lasiiyay warbixin ku saabsan nuucyada maqaamka caasimadda ee ka jira dowladaha Federaalka dunida si aragti looga qaato.
Guddoomiyaha ayaa ka mahadceliyay warbixinta tifaftiran ee loo soo bandhigay, waxa uuna ballan qaaday in ay si dhow ula shaqayn doonaan hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka, isla markaana dadka deggan caasimadda ay diyaar u yihiin in ay aragtidooda ku biiriyaan howlaha ka socda Dastuurka.
Wasiirka dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa bogaadiyay sida maamulka Gobolku ay waqtigooda usiinayaan arrimaha masiiriga ah ee dalka gaa rahaan Dastuurka.
“Dastuurku ma ahan wax Wasaaradda dastuurka kaliya kuxiran balse waa waxyaabo 80% quseeya hay’adaha Dowladda ee kala duwan, waana in ay aragti ka keenaan aagagga ay hay’ad walba ku howlantahay, tusaale waa in Wasaaradda caafimaadku ay aragti ka keentaa sida loo maamulayo caafimaadka, waxbarashada sidoo kale waana in ay ku salaysnaataa cilmibaaris” ayuu yiri Wasiirka Dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac.
Wasaaradda Dastuurka aya wada howlo muhiim ah Arrimaha Dib-u-eegista Dastuurka, waxayna kulamo shaqo oo badan horey ula yeelatay, lana yeelan doontaa hay’adaha kala duwan ee dowladda, kuwaa oo udub dhexaad u ah arrimaha geedisocodka dib-u-eegista dastuurka.
Arrimaha u baahan wadaxaajoodyada siyaasadeed si loogu daro Dastuurka ayaa waxaa loga doodi doonaa banbax howleed ballaaran oo ay Wasaaraddu la yeelan doonto golaha Wasiirada si aragti midaysan looga yeesho.
Doorka Haweenka ee Doorashooyinka iyo Amniga oo laga hadlay “SAWIRRO”